Burmese Font Converter - Zawgyi ⟺ Unicode, Myannmar3And Win Fonts
General Knowledge, Website Basic KnowledgeMyoWin
မြန်မာဖောင့်တွေထဲမှာ Unicode standard နဲ့ မကိုက်တဲ့ font တွေက များတဲ့အတွက်။ Font converter တွေကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းရေးပြီး online မှာ တင်ပေးလာကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အပြောင်းရဆုံးကတော့ Zawgyi to Unicode သို့မဟုတ် Unicode to Zawgyi ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာအတွက် Unicode font ကိုသုံးဖို့ campaign တွေလုပ်လာကြတဲ့အခါ လူတွေက Unicode ကိုလည်း သုံးတော့ သုံးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Zawgyi font ကိုတော့ စွန့်လွှတ်ဖို့ မလွယ်သေးဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူတို့နှစ်ခုကြား font convert လုပ်တာ ပိုများမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကတော့ ခုနောက်ပိုင်းစာရိုက်ရာမှာ Myanmar2, Myanmar3 စတဲ့ font တွေသုံးလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အရင်က Win font တွေကို သုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Win font to Unicode converter ကိုသုံးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
Burglish – Burmese Font Converter
သူကတော့ ပုံမှာမြင်တွေ့ရသလိုပဲ Zawgyi, Myanmar3, Padauk, Win fonts, CE font နဲ့ တစ်ခြားဖောင့် တော်တော်များများကိုလည်း အပြန်အလှန် တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းနိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါ။
Burglish website သို့သွားရန် »
ဒါကတော့ အရှင်းဆုံးပါပဲ။ အကွက်နှစ်ကွက်ပေးထားတယ် Zawgyi တစ်ကွက် Unicode တစ်ကွက်။ ဘယ်အကွက်မှာ စာရိုက်ရိုက် နောက်အကွက်မှာ convert လုပ်ပြီးသားက တိုက်ရိုက်ပေါ်မယ်။
Rabbit Converter သို့သွားရန် »
Zawgyi Converter – MrDBA Blog
ဒီတစ်ခုကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာတော့ ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းတာနဲ့ ယူနီကုဒ်ကနေ ဇော်ဂျီကိုပြောင်းတာကို တစ်မျက်နှာစီ သက်သက်ခွဲထားပါတယ်။
MrDBA Blog သို့သွားရန် »
← Professional web developer by Ei Maung နှင့် Ubuntu: Linux for You စာအုပ်များ အခမဲ့ download ပေး Windows 32 bit နဲ့ 64 bit ကွာခြားချက် →
75 thoughts on “All Burmese Font Converter – Zawgyi ⟺ Unicode, Pyidaungsu, Myanmar3& Win Fonts”
myint thein says:
မြန်မာစာရိုက်ရာမှ အရင်က ကျွန်တော့ကွန်ပြူတာမှာ မြန်မာ ၃
တင်ပြီးသုံးလို့ရဘူးတယ်။ ဇော်ဂျီလဲတွဲသုံးရော မြန်မာ၃ တင်မရ
မြန်မာသုံး ပြန်သုံးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ ဘယ်မှာ ဝယ်ရမလဲ
ကွန်ှဗာတာတွေလဲ လိုပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ လုပ်ချင်ပါတယ်။
Myanmar3Installer ကို အရင် Installလုပ်ကျိလေ
ပီးတော့ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်မှာပါတဲ့ Key ကို ကွန်ပြုတာထဲ ထည့် အာ့ဆို သုံးလို့ရဘီ
I Can’t open this Link,
can you help me how to do?
that’s the new link
THET HTAR AYE says:
window 10 64 bit MYANMAR FONT AVAILABLE TO DOWNLOAD?
Windows 10 has built in unicode- myanmar font and input.
The purpose is different. These are for existing text that are written in Zawgyi or other fonts. This has nothing to do with the Unicode keyboard that comes with windows. Also, this post has writtenalong time ago.
K.T Aung says:
How to convert old myanmar font, which consists mixed english words in sentences, to Unicode? Please.
a ko toe yae laptop mar facebook tone yin myanmar sar twe ka mhar my par tl bal lo lote ya ma lae
ုkyaw myo oo says:
facebook account မှာမြန်မာလိုမပေါ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပေးပါ
Kyaw Si Thu says:
ကျွန်တော့ website မှာ Myanmar3 font ကိုသုံးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ design က အရမ်းပိန်းနေတယ် design အသားပေး website တွေအတွက် ဒီ tradition လက်ရေးနဲ့က အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ နည်းလမ်းရှိရင် လမ်းညွှန်ပေးပါ။
ဒီ email ကိုပို့ပေးပါ။ [email protected]
https://www.google.com/get/noto/#sans-mymr font လေး မဆိုးဘူးဗျ။
အဲ့ဒီ နိုတိုစံဖောင့်ကို ဘယ်လိုရိုက်ရလဲ။ လက်ကွက်လေးရှိရင် ကူညီမျှဝေပါဦး။ converter ရော ရှိလား။ [email protected] ပါ
Unicode font အတွက်လက်ကွက်တွေ ကီးဘုတ်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်။ Converter ကတော့ အခုပို့စ်ထဲက တစ်ခုခုကိုသုံးလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ဖိုင်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်ခင်ဗျ။ font ပြောင်းဖို့ပါ။
ဖိုင်က matrix 1 နဲ့ရေးထားတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုပါပါတယ်။ ပြောင်းကြည့်တော့
အင်္ဂလိပ်စာတွေပါ ပြောင်းပစ်တယ်ခင်ဗျ။ အင်္ဂလိပ်စာတွေကို သပ်သပ် မပြောင်းပဲ ဗမာစာကြီးသပ်သပ်ပြောင်းလို့ရပါသလားခင်ဗျာ။..
မပြောင်းချင်တဲ့စကားလုံးတွေကို အခုပေးထားတဲ့ website တွေမှာ exception မှာထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ exception မှာထည့်ထားတဲ့စကားလုံးတွေဆို မပြောင်းတော့ပါဘူး။
Kyaw Ye Htut says:
အရင်က Win font တွေကို သုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Win font to Unicode converter ကိုသုံးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Unicode Converter latest Version ရှိလျှင် သုံးချင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာ down ရမှာလဲ။ [email protected] သို့ လမ်းညွှန်ပေးပါ ခင်ဗျား
Online မှာ​ပြောင်းရတာား software ကို​ဒေါင်းပြီး​ပြောင်းလို့မရဘူးလား ဗျ
Ko Bae Gyi says:
facebook မှာ တခြားတင်တဲ့သူရဲ့စာ font မမှန်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ei ei chwo says:
myanmar unicode converter software ကို download link လေးပေးပါအုံးဆရာ
aung kyaw kyaw says:
font convert အတွက် အခက်အခဲ ရှိ နေလို့ Font converter free download
Hein min tun says:
Excel ထဲမှာ win fonts နှင့် ရိုက်ထားတာ များကို myanmar3 ဘယ်လိုပြောင်းလဲ ခင်ဗျ
Min Zaw Thway says:
wininnwa ကနေ myanmar3 ,2ပြောင်းတဲ့ software လေးရရင်ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ရောင်းတဲ့နေရာလေးရှိရင်လည်း ညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အလုပ်မှာအခက်အခဲလေးတွေရှိနေလို့ပါ။ software link လေးချပေးလို့ရရင် [email protected] လိပ်စာလေးကိုပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Mei Kor says:
winInnwa ကနေ zawgyi one သို့ပြောင်းတဲ့ software ကို ကွန်ပျုတာမှာသုံးလို့ရအောင် တစ်ရက်နှစ်ရက်အတောအတွင်း ဆရာများမစပေးကြပါခဗျား
ZIN PHONE says:
english to myanmar translate လေးလုပ်ချင်လို့ LINK လေးပေးပါလား
U soe maung says:
Pls download kanaung converter software
maung nyan says:
ဆရာရေ ဒေါင်းလော လုပ်ဖို့ Link ပေးပါခင်ဗျား
Ei Thandar Khaing says:
ညီမတို့ website ကိုmyanmar3 သုံးထားတာ ဖုန်းနဲ့input ပေးတာအဆင်မပြေလို့
ဖုန်းထဲကmyanmar3 မပါတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ပါ ဆရာ
Hram Len says:
How and where to I download myanmar fonts converter Win fonts to myanmar3fonts
i wanna convertapdf/word (book) written by zawgyi to unicode. is there any recommended software/app that can convert massive amount of data.
As I have check this is the all resources relating with font converting on the website. I am not sure about the pc software though. But I don’t think there would beatool like this unless somebody created it for himself.
bal lo down ya ma lae
I want to ( Myanmar3) Font to (-Win—Researcher, Win Innwa——) Fonts Converter.
win 8 myanmar fonts မှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
Daw Nwe Nwe Win says:
Please send ma Myanmar3Font to ZawGyi Fonts
Mee Pont says:
myanmar3 PDF ကို word file ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
Google မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ https://www.google.com.mm/search?q=pdf+to+word+converter+online&oq=pdf+to+word+converter+online&aqs=chrome..69i57j0l5.6132j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Mg Paing Zin Min Myat says:
I don’t know how to do. Please giveaguideline.
I want to convert Padauk font to WinResearch font
Workaudiobook ဆိုတဲ့ pc software ​လေးမှာ myanmar font မမြင်​ရလို့ပါ
Font install ဘယ်​လိုလုပ်​ရမယ်​ လုပ်​လို့ရတယ်​ဆိုရင်​ ဆက်​သွယ်​​ပေးပါခင်​ဗျာ
https://mmfonts.files.wordpress.com/2011/10/arialzawgyi20071230.odt ဒီfont လေး download လုပ်ပြီး install လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် restart ချကြည့်ပါ။
တောက်လျှောက် zawgyi ကိုပဲ သုံးလာတဲ့ သက်တမ်းရင့် ဖိုရမ်တွေ အတွက် Unicode ပြောင်းဘို့က တော်တေ်ာ အခက်ခဲ ဖြစ်နေပါတယ် ။ Unicode ကို ပြောင်းသုံးလိုက်ယင် ရှိတထားတဲ့ topic တွေ post တွေ အားလုံး ကမောက်ကမ ဖတ်မရ ဖြစ်ကုန်ရော ။ SMF forum တွေ အတွက် zawgyi to Unicode converter Mod လိုမျိုး ရှိနိုင်ယင်တော့ တော်တေ်ာ အဆင်ပြေ မယ် ထင်တယ် ။ အဲဒါမျိုး ရှိ မရှိ သိချင်ပါတယ်ဗျ ။
အဲလို မျိုးတော့ မ တွေ့ မိသေးပါဘူး။ Database file ကို export လုပ်ပြီးတော့ content ကို Rabbit converter လိုမျိုးထဲ ထည့်ပြောင်းကြည့်ရင်တော့ ရနိုင်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Backup ထားပါ။ Local မှာကောင်းကောင်းစမ်းပါ။ ရတာသေချာမှ online ပေါ်က database ကို လုပ်ပါ။
Myanmar text ကနေ Zawgyi ကိုပြောင်းဖို့ ဘာလိုလည်းဗျ
မလုပ်တတ်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလည်း ပြောင်းတာ ယူနီကုတ်။ ခုသုံးနေတာ ဇော်ဂျီ
Len Aye says:
If anyone is interested, I wroteasimple python script to convert entire files in Zawgyi to Unicode. You can call this script viaacommand line, so there is no need to copy and paste ZG text to the online converters.
Download the script from my GitHub: https://github.com/lenaye/zawgyi-unicode-file-converter
You need to install Python in your computer, which you can download from https://www.python.org/downloads/
Unicode ကို Adobe Suit တွေမှာကော သုံးလို့ရလားရှင့်။ Word မှာရိုက်ထားတဲ့ Unicode ကို Adobe Indesign ပေါ်မှာ သုံးချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တဈခြို့စာလုံးတှတေော့ မရသေးဘူးဗြ။ ဒီ font လေးကတော့ ရမယျထငျတယျ။ စမျးကွညျ့ပါ။
Download => https://mega.nz/?fbclid=IwAR1e6xy9GFvMftVj9zpWvkxky_VXkVNzg4d2gkTxZuffLehnf85BTyXAvzM#!f1MEVSDa!fO9jI3Fuxn9uUxCqj3mmh66Wf8mnSpi2l110Q6qpJnQ
Naing Kyaw says:
ဒီဟာလေးကို offline converterလေးလုပျထားတာ မရှိဘူးလားခငျဗြာ
Mg Sein Ta says:
I want to convert from zawgyi font to win researcher font. how to convert it?
Chaw Su says:
Burglish က ဖွင့်မရတော့ဘူး ဘယ်လို ပြောင်းရမလဲ
Link update လုပျထားပါတယျ
Myo Min Htike says:
great job! Keep it up. Thank you.
CPT Htin Aung says:
Win များအားဇော်ဂျီ ပြောင်းပေးတဲ့အတွက်ပါ…
I cannot open http://www.burglish.com.
Please help and fix.
I can’t open this link.
Please check and help to fix.
Burglish Test Engine can not open , how to do ???
Sak Maw says:
Nilar Pyae Sone says:
WinRershearcher FONT to PYIDAUNGSU FONT change how to do? please.
1. go to burglish
2. choose any win font on first field (coz all win fonts are same)
3. choose myanmar3 on second field (myanmar3 will be same with pyidaungsu font)
How do i convert zawgyi to pyidaungsu font? plz
Thida Khin says:
How can converter down? Please
font converter software လေးပေးပါလား၊
Nang L Myint says:
Kindly download Burmese Zawgyi Unicode pyitawnsu into my page for me or please help me step by step to install it, please. I am not too good in installing burmese fonts. Actually, I don’t know at all. Thank you so much.
Nang L Myint
Do Lam Mung says:
Please tell me to show the correct myanmar font, when write zawgyi code in html